Ampidino Thumb Drift APK ho an'ny Android
Ampidino Thumb Drift
Ampidino Thumb Drift,
Thumb Drift dia azo faritana ho toy ny lalao hazakazaka finday ahafahanao milalao mora foana ary mahafinaritra be.
Hazakazaka miroboka sy manaitaitra miandry antsika ao aminny Thumb Drift, lalao izay azonao sintonina sy milalao maimaimpoana aminny finday avo lenta sy ny takelaka ampiasainao aminny rafitra fiasa Android. Ny tanjonay lehibe aminny lalaonay dia ny hampahafantatra ny fahaizanay eo an-daniny, ary hamita ireo hazakazaka aminny alàlanny fanohizantsika ny diantsika haingam-pandeha etsy ankilany. Na dia toa tsotra aza ity asa ity, dia hazakazaka sarotra be no miandry antsika.
Thumb Drift dia lalao hazakazaka izay azonao atao aminny rantsantanana iray monja. Eo am-pilalaovana ny lalao dia misintona ny rantsan-tànanao aminny ankavanana na aminny ankavia ianao mba hivezivezy any aminny lalana tianao ny fiara. Ity no fomba handresenao ny famolahana aminny hazakazaka am-pilalaovana ary ahazoana isa aminny fanangonana ny volamena eny an-dalana. Azonao atao ihany koa ny mamoha fiara samihafa aminny lalao.
Rehefa avy naka fihodinana maranitra ianao dia mila manangona ny fiaranao aminny fotoana mety. Rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ianao, dia hitanao fa vaky be ny fiaranao. Ireo sakana samihafa sy hazakaza-pihenjanana avo lenta dia miandry ny mpilalao eny aminny làlana aminny lalao.
sary tsara tarehy